औद्योगिकीकरणबिना मुलुकको संवृद्धि असम्भव, नीतिगत सुधारहुन्छ - उद्योगमन्त्री
काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले औद्योगिकीकरणबिना मुलुकको संवृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन् ।उद्योग मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान कार्यक्रममा उनले उत्पादन र उद्यमशीलताले मात्रै आर्थिक संवृद्धि हुने भन्दै..
​आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, विदेशी सहयोग पारदर्शी बनाउन सरकार दृढ
काठमाडौ। सरकारले मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक उन्नयनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निकायबाट प्राप्त भौतिक एवम् आर्थिक सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो..
​‘पानामा पेपर्स’ प्रकरणमा नाम जोडिएका माथि अख्तियारले छानबिन थाल्यो
काठमाडौं । संसार हल्लाएको पानामा पेपर्ससँग नेपालको सन्दर्भ जोडिएका अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । सो प्रकरणमा नेपालका केही उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारीसमेत जोडिएको हुनसक्ने देखिएपछि आयोगले..
​घरेलु अन्तर्गत व्यावसायिक तालिम सम्पन्न
काठमाडौँ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तालिम दिँदै आएको छ । सिलाइ बुनाइ, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ्ग, मेकानिक्स, फर्निचर, पेन्टिङलगायत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति..
​किन हुन्छ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँको अभाव ?
विरगञ्ज । मध्य तराईका बारा, पर्सा र रौतहटमा भारतीय रुपैयाँको अभाव भएको छ । भारतीइ रुपैयाँ अभावले यहाँका उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा प्रभावित भएका छन् । भारततर्फ पूँजी पलायन भइरहेको..
​फस्टायो कालीकोटमा विप्रेषण कारोबार
कालीकोट । विदेश जाने लहरसँगै पछिल्लो समय जिल्लामा विप्रेषण कारोबार फस्टाएको छ। पाँच वर्षअघि जिल्लामा एक मात्र हिमचुली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले बैंक अफ काठमाडौँबाट सुरु गरेको विप्रेषण हाल आएर आइएमई,..
​आगामी वर्षको बजेट पनि पुननिर्माणमै केन्द्रित अर्थमन्त्री पौडेल
बुटवल । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयात र निर्यातको असन्तुलन रोक्ने, भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माण र सवल अर्थतन्त्रकेन्द्रित हुने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले संविधानको कार्यान्वयनलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता..
​एक वर्षपछि तातोपानी नाका सञ्चालन
चौतारा। भूकम्पका कारण एक वर्षदेखि बन्द रहेको चीनसँगको तातोपानी नाका अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । करिब दुई सय कन्टेनरमा राखिएका चिनियाँ तयारी पोशाक, जुत्तालगायत सामान अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न चीन..
​दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनी आफन्तले शव बुझेर लगेका चालक जिउँदै
दाङ । दाङको तुलसीपुर–१ को राम्रीमा बुधबार साँझ लु २ त २५५८ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको भनिएका चालक दुईदिनपछि अस्पतालमा आएका छन्। घाइते अवस्थामा उनी आज बिहान राप्ती अञ्चल..
​शौचालय प्रयोग नै नगरी एकहत्तर वर्षको उमेर बित्यो
मोरङ । ७१ वर्षको उमेरसम्ममा पनि कसैले शौचालय (चर्पी) प्रयोग गरेन भनेको सुन्दा कसले पत्याउला र रु तर यो कुरा सत्य हो । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, मोरङ बुधनगर–९ का..
भुकम्प पिडितलाई पुनर्निर्माणको रकम वितरणमा प्रविधि मुख्य बाधक
दोलखा । विनासकारी भूकम्पपछि दोलखाको सिंगटीबाट शुरु भएको निजी आवास पुनर्निर्माणको रकम वितरणमा प्रविधि मुख्य बाधक बनेको छ । गत चैत २८ गतेबाट लादुक र लामिडाँडा गाविसमा निजी आवास पुनर्निर्माणको रकम..
प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृत एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि..
काठमाडौँ । कामका लागि घरबाट सबैसँग बिदा दिएर काठमाडौँ आउँदै गर्दा अचानक बस भिरबाट खसेपछि १७ वर्षीय मिलन राईले बाँचिएला भन्ने सोच्नु भएन । ‘बसमा सवार सबै यात्रु डरले चिच्चाए, कराए..
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले समस्त नेपाली जनतालाई नयाँ वर्ष २०७३ को शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले नयाँ वर्षका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विक्रम सम्वतले मिति, तिथि..
​प्रधानमन्त्री ओलीले आज साँझ ५ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले..
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेलबाट काठमाडौंका लागि छुटेको यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार विहान ५ बजे सदरमुकाम दिक्तेलबाट यात्रु लिएर काठ्माण्डौंका लागि छुटेको बा २..
​सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाबीच समझदारी
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विभागका तर्फबाट महानिर्देशक..
​आगामी वर्ष पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको उच्च प्रगति कायमै : विश्व बैंक
काठमाडौं । आगामी वर्ष पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको उच्च प्रगति कायमै रहने भएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आगामी वर्ष २०१७ मा यस क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत..
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका सङ्गठित संस्था, बोर्ड, परिषद्, समिति तथा जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीपन नदेखिएको औँल्याएको छ । उक्त..
​ठूलो परिणाममा नक्कली भारु बरामद, पाकिस्तानी र नेपाली पक्राउ
काठमाडौं । पाकिस्तानबाट काठमाडौं हुँदै भारत लैजान लागिएको एक करोडँ नक्कली भारतीय रुपियाँसहित छ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा एक पाकिस्तानी र पाँच जना नेपाली छन् । पाँच सय..
काठमाडौं – नेपालको राज्य बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउनेगरी ब्रसेल्सबाट नेपालबारे झुठो प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ले बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउन तथ्यहरु बंग्याउँदै झुठो प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको हो । ‘नेपालको विभाजनकारी..
​आफै हिड्ने बाटो बनाएका एउटै गाउँका भूकम्पपीडितले पाए डेढ करोड रुपैयाँ
नुवाकोट । भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप स्थानीयस्तरमा काम लगाई नगद रकम दिने कार्यक्रममा कामका लागि नगद कार्यक्रमअन्तर्गत मदानपुरका भूकम्पपीडितलाई रकम प्रदान गरिएको छ । बुधबार मदानपुर गाविसमा आयोजित कार्यक्रममा गाविसभरिका एक हजार ७०६..
एकै स्थानका दुई किशोरी एकैसाथ बलात्कृत
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको सुन्दरपुर गाविसमा दुई किशोरी एकैसाथ बलात्कृत भएका छन् । सुन्दरपुर–८ बस्ने १४ वर्षीया र १३ वर्षीया किशोरी एकैसाथ बलात्कृत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । दुबै..
पटना । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहार राज्यमा अचानक केही मानिसमा अनौठो गतिविधि देखा पर्न थालेको छ । अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमले जनाएअनुसार बिहारमा कयौं बेहोस हुन थालेका छन् भने..
​अब उपत्यका भित्र मासु ल्याउन नपाइने, प्याकिङ गरेरपछि मात्र मासु काठमाडौँ ल्याइन पाउने
शर्मिला पाठक काठमाडौँ । उपत्यकाको फोहर थप व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खानयोग्य मासु मात्र प्याकिङ गरी ल्याउने तयारी गरेको छ। जनावर ल्याएर मासु तयार गर्दा निस्कने फोहर कम गर्न महानगरले यस्तो..
​खोला किनारमा प्रहरीले भेट्टायो १५ थान ल्यापटप र २० थान मोबाइल फोन
लहान । सिरहा नगरपालिका–६ स्थित कमला खोलाको बाँधबाट प्रहरीले गएराति ल्यापटप, मोबाइल, इयरफोनलगायतका सामान बेवारिसे अवस्थामा फेला पारी बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले एचपी कम्पनीको..
धनी र शक्तिशाली २०० भन्दा बढि व्यक्तिहरुले सम्पत्ति कसरी लुकाए भन्ने गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक
काठमाडौं । धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले कसरी आफ्नो धनसम्पत्ति लुकाउन कर छली गर्दा रहेछन् भन्ने खुलेको छ । उनीहरुले कर छली गर्नको लागि कसरी कम भन्दा कम सम्पति देखाउछन् भन्ने गोप्य..
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडकखण्डमा बिना अनुमति क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा कालोपत्रेको काम थालिएको सडकखण्डमा पर्ने मुडे, नाँगी र..
एजेन्सी । भारतीय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने बिग बोस कार्यक्रम तपाईलाई कत्तिको मनपर्दछ वा मनपर्दैन , त्यो आफ्नै कुरा भयो । तर यो रियालिटी कार्यक्रम विविध कारणले चर्चामा आइराखेको हुन्छ, कहिँले..
​२०० मुहान सुक्दा रारा तालको सतह आधा मिटर घट्यो, स्थानीयवासीलाई भोकमरीभन्दा पानी कै चिन्ताले सतायो
मुगु । रारा गाविस मुर्मा गाउँका धनसिंह रोकाया गाउँमा वर्षौंदेखिको खानेपानीको मूल सुकेपछि चिन्तित भएका छन् । करिब ७० घरधुरी रहेको उक्त मुर्मा गाउँका स्थानीयवासीलाई भोकमरीभन्दा पिउने पानीको बढी चिन्ता छ..
Results 1994: You are at page 51 of 67